13 / 07 / 2021 13 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 158 Views စာ0မှတ်ချက် 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 40490 NINJAGO ၁၀, 40490 NINJAGO 10 နှစ်မြောက် BrickHeadz, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City သငေ်္ဘာကျင်း, adidas, BrickHeadz, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, Lego Adidas, Lego BrickHeadz, Lego Ninjago, LEGO.com, Ninjago, NINJAGO ပင်လယ်ကြမ်းပြင်, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူပေးဆောင်, PWP
တစ်ကြိမ်လစာ - နှင့်အတူ - ဝယ်ယူ Lego BrickHeadz အစုံ 40490 NINJAGO ၁၀ stock မှာကုန်နေပြီ LEGO.comပထမရက်အကြာမှာပဲ ရောင်းချသွား.
ယခုအခါယူကေနှင့်ဥရောပတို့တွင်ယာယီကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်ယာယီကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်စာရင်းသွင်းပြီးဖြစ်သည်။ ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင်ယူအက်စ်တွင်ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအသုံးအနှုန်းများအရကွဲပြားခြားနားမှုသည်ယခင်ဒေသနှစ်ခုသို့ပြန်သွားနိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်း၎င်းသည်ကျန်ရှိသောစတော့ရှယ်ယာဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ ဇွန်လကနေ - သည့်အခါ BrickHeadz triple-pack ကို£ 9.99 / $ 9.99 / € 9.99 နှင့် ၀ ယ်နိုင်သည် Ninjago £ 85 / $ 85 / € 85 အထက်ဝယ်ယူမှု - မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။
Golden Lloyd၊ Nya Samurai X နှင့် Firstbourne Dragon တို့ကိုပုံဖော်ထားသည့် statuettes သုံးခုကို p အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့သည်။art ၏ကျယ်ပြန့်အခမ်းအနားများ၏ Ninjagoရွှေရောင်ရုပ်ပုံများစုဆောင်းခြင်းအထိတိုးချဲ့ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့, အဝတ်အစားပ္ပံ နှင့် supersized ထားကြ၏ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်.
ဆိုလိုသည်မှာမှာရရှိနိုင်နေဆဲအများကြီးရှိပါတယ် LEGO.com သင်တစ် ဦး ဆာငတ်လျှင် Ninjago ဤအရောင်းထွက်ကျော်လွန်ပြီး fix BrickHeadz70620 ဖို့ဖျောပွတိုးချဲ့အပါအဝင် Ninjago နှင့် 70657 Ninjago City Seabound အစုံ၏အသစ်စက်စက်လှိုင်းနှင့်အတူဆိပ်ကမ်းများ။ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်မှ ၄၀၄၈၆ အထိ ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးနှင့်သင်နှစ်ဆ VIP ရမှတ်များလည်းရလိမ့်မည် adidas မူရင်းစူပါစတားသည်£ 95 / $ 85 / € 95 အထက်အမှာစာများနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
← LEGO သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်များအတွက် Landing page ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
Lego Ideas Spider-Man ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူကြေငြာခဲ့သည် →